Ese maficha uye shanduko inowanikwa pa Windows 11 kuvaka 22557
Heano ese maficha anga achishanda neMicrosoft kune matanhatu apfuura ekutarisa anovaka Windows 11.
Microsoft nguva pfupi yadarika yakasundidzira yakakura update ye Windows 11 (kuvaka 22557) muDev Channel ye Windows Insider Chirongwa chine zvakawanda zvezvinhu zvitsva uye kuvandudzwa.
Semuenzaniso, mukuburitswa uku, hofori yesoftware yakaunza kugona kugadzira maforodha muKutanga menyu. Iwe unogona zvakare kudhonza nekudonhedza mafaera kana kudhonza nekupinza maapplication muTaskbar. Iyi ndege inosanganisirawo itsva Live Captions chimiro. Uye iyo "Usavhiringidze" chimiro chichakubatsira iwe kunyararidza mabhena ekuzivisa kuti iwe ugone kutarisa pabasa rako.
Uyezve, pane nzira itsva yekutora windows. Microsoft iri kuita shanduko kumagadzirirwo emagetsi ekutanga kubatsira kuderedza kushandiswa kwemagetsi uye kuburitsa kabhoni. Iyo legacy zita mabhawa ari kuwana interface yekuvandudza. Kune mitsva yekubata gestures, nyowani-itsva Task Manager inofanana nemutauro wemazuva ano wekugadzira we Windows 11, uye nezvimwe zvakawanda.
Kunyangwe aya ari ekuwedzera anogamuchirwa, aya maficha anowanikwa muDev Channel, zvinoreva kuti haana kusungirirwa kune chero kuburitswa chaiko. Windows 11. Nekuda kweizvozvo, ivo havatarisirwe kusvika pane chero kuburitswa kwe Windows. Pese kana chinhu chagadzirira, kambani inogona kusarudza kuiburitsa nekukasira kana kuita kuti ive chikamu chechikamu cheiyo inotevera huru yekuvandudza. Kana iyo ficha ikasasangana nezvinotarisirwa nekambani, saka haife yakaona chiedza chezuva.
Uye zvakare, kubva yedu yekupedzisira preview roundup ye kuvaka 22523, Microsoft yakaitawo kuti pawanikwe mamwe maonerwo mana ane shanduko dzakasiyana siyana, kusanganisira kuvaka 22526, 22543, 22538, 22533, uye 22526. Kunyangwe izvi zvivakwa zvekutarisisa zvaive zvisina kukosha sekuvaka 22557, vakaunza hutsva hutsva nekuvandudza.
Windows 11 kuvaka 22557 uye previews
Idzi ndidzo shanduko dzakanyanya kukosha mune shanu dzekupedzisira Insider previews:
Tanga menyu mafolda
Pakuvaka 22557, Windows 11 inosvitsa kugona kuronga mapini ako muKutanga menyu uchishandisa maforodha.
Iyo ficha inoshanda nekukwevera app pamusoro peimwe app kugadzira folda. Iwe unogona kugara uchidhonza nekudonhedza mamwe maapplication kuronga maapplication ako. Iwe unogona zvakare kurongazve maapplication mukati mefolda uye kubvisa maapplication kudzima folda. Iri ibasa ririkuitika sezvimwe zvese, uye kambani inovimbisa kutumidzazve sarudzo mune gare gare inovaka.
Microsoft iri kuteerera mhinduro uye kudzosa zvimwe zvakakumbirwa zvakanyanya, zvinosanganisira kudhonza nekudonhedza mafaera uye kudhonza nekudonhedza kuti ubatanidze zvinhu.
Mukuburitswa uku, vaedzi vanogona ikozvino kudhonza nekudonhedza mafaera nekudzvanya bhatani reapp kuunza iyo windows uye vhura faira. Uye zvakare, iwe unogona ikozvino kudhonza nekudonhedza maapuro kubva ku "All apps" runyorwa muStart menyu kuti uvapinise muTasbkar. (Izvi hazvishande kana ukadhonza maapplication kubva pane zvakapiniwa kana zvinokurudzirwa zvikamu.)
Kana iwe ukashandisa iyo nyowani "share hwindo" ficha kugovera hwindo reapp pamisangano yeMicrosoft Teams, iwe zvino uchaona chiratidzo chekuona kukuzivisa iwe app yauri kugovera.
Sechikamu cheKurumidza Settings flyout shanduko, kana komputa yako iine inodarika imwe ruvara chimiro, sarudzo nyowani ichave iripo muflyout kuti ichinje pakati peprofile nekukurumidza.
Iyo "Cast" icon ichaonekwa mune system tray paunenge uchikanda kubva kune imwe skrini kukuzivisa iwe kuti uri kukanda. Kudzvanya bhatani kunovhura iyo "Cast Kurumidza Settings" kudzora rwizi.
Zvakare, iyo bhatiri yekuchaja icon yakagadziridzwa nemwenje yakashinga pane tambo yemagetsi.
Kubva kuvaka 22533, Windows 11 inosanganisira kubhururuka kutsva kweiyo system hardware zviratidzo zvevhoriyamu, kupenya, kuvanzika kwekamera, kutonga kwekamera, uye mamiriro endege kuti aenderane nedhizaini nyowani padesktop.
Uye zvakare, kune iyo maikorofoni chiratidzo, iwe zvakare uchaona yekusimbisa flyout paunenge uchinyima runhare uchishandisa iyo Windows kiyi + ALT + K nzira yekudimbudzira keyboard. Uye kana iwe ukavhura iyo Kurumidza links menyu nekudzvanya-kurudyi bhatani reKutanga, iyo "Maapuro & Zvimiro" yekupinda yakatumidzwa zita rekuti "Installed apps."
Usakanganisa uye Focus
Ichi chitarisiko che Windows 11 inouyawo neitsva "Usavhiringa" uye "Focus" maficha. Iyo "Usavhiringidze" ficha inorerutsa basa rekunyararidza zviziviso, uye iyo "Focus" chiitiko chitsva chekukubatsira kuti urambe wakatarisana nebasa riripo uye kubvisa zvinokuvhiringidza.
Iyo "Usavhiringidze" chikamu cheZviziviso system, uye ichaita kuti zvive nyore kudzvanya mabhena ekuzivisa pasina kurasikirwa neyambiro yako. Iwe unogona kugara uchiona izvo zvawakapotsa muNotidziro Center.
Iyo ficha ine marongero ayo Settings > maitiro > Notifications. Unogona kubatidza kana kudzima chimiro pane ino peji, kuseta otomatiki mitemo, kuseta zviziviso zvekutanga, nezvimwe.
Zvinogonekawo kutanga "Usavhiringa" kubva ku "Zviziviso" peji kana bhatani riripo kumusoro-kurudyi kona yeNotisi Center (Windows kiyi +N).
Iyo "Focus" ficha ikozvino yakabatana neiyo Clock app kuti uwane iyo yekutarisa maturusi, kusanganisira yekutarisisa nguva uye mimhanzi inodzikamisa. Semuenzaniso, paunovhura Notification Center, iwe zvino uchaona zvidzoreso muKarenda chikamu chekuseta nguva yeseshini uye wotanga iyo yekutarisa.
Paunotanga chikamu, iyo Taskbar kubheja inodzima, uye usakanganise maficha anobatidzwa. Zvakare, iyo mini yekutarisa timer ichaonekwa pachiratidziri. Kana chikamu chapera, chiziviso chinokuzivisa iwe kuti chikamu chapera.
Maseting echinhu ichi anowanikwa pa Settings > maitiro > Focus.
Nyora uye hwindo
On Windows 11, unogona kuwana iyo "Snap marongero" menyu nekutenderera pamusoro pemabhatani ekuwedzera. Iwe zvakare uchave neimwe nzira yekuita basa rimwechete. On Windows 11 kuvaka 22557, kubata hwindo kunokonzeresa "Snap marongero" yekudonha-pasi menyu inozoonekwa kumusoro kwechidzitiro. Iwe unogona ipapo kudhonza hwindo kuti usarudze dhizaini yekuitora, uye ipapo "Snap assist" ichatora iyo kuti ikubatsire kupedzisa kuvaka marongero.
Pamusoro pezvo, Microsoft inotaura kuti yakavandudza iwo animation "kuita seamless pakati penzvimbo mune dhizaini."
Sechikamu chekuvandudzwa kwemahwindo, ndege iyi inogadziridza "Snap marongero" kuratidza chikamu chedesktop yekumashure kuti zvive nyore kuziva boka pakati pemamwe mapoka. Shanduko iyi yekuona ichaonekwa kana uchitenderedza pamusoro peapp muTaskbar yeboka, muTask View, uye kana uchidaidza "Alt + Tab" nzira yekudimbudzira.
Zvakare, Microsoft iri kuvandudza shanduko yemifananidzo inoratidza kufambisa hwindo rakadzvanywa kune imwe nzvimbo. Pamapiritsi, kutenderera pakati pemufananidzo nemamiriro ekunze anozonzwa kudaira uye nekukasira.
Iwe unozonzwa mashoma ekuzivisa ruzha paunenge uchibatanidza uye uchibvisa madhokisi uye ekunze kuratidzwa. Kufambisa chitubu uye windows pakati pezviratidziro zvino zvichave nyore zvishoma. Microsoft iri kuita izvi nekurega chituru chichisvetukira pamusoro penzvimbo dzayakambomira.
Ichi chimiro chinowanikwa pa Settings > kuratidza > Yakawanda kuratidza uye kushandisa iyo Rerutsa kufamba kwecursor pakati pezviratidziro kuita.
Sechikamu chekuvaka 22526, iyo "Alt + Tab" nzira yekudimbudzira yave kuratidzwa seyakavharwa nehwindo pane yakazara-screen chiitiko.
Chekupedzisira, paSnap Layouts, kana uchichinja saizi maapplication akadzvanywa, iwe uchaona chiratidzo pamusoro peiyo acrylic kumashure kune maapplication asiri mukutarisa kuti zvive nyore kunzwisisa maapplication auri kusanza.
File Explorer kuvandudzwa
Windows 11 kuvaka 22557 inouyawo neyakagadziridzwa vhezheni yeFaira Explorer iyo inosanganisira akati wandei ekuona shanduko nekuvandudza.
Quick Access mafaira
Muchigadziriso ichi, Microsoft inosuma kugona kubaya mafaera kune "Kurumidza Kupinda" peji. Saka izvi zvinoreva kuti nekudzvanya-kurudyi faira, iwe zvino uchawana "Pin kuKurumidza Kupinda" sarudzo. Nekudaro, iyo faira haizoonekwa mune yekuruboshwe yekutenderera pane. Pane kudaro, ichaonekwa muchikamu chitsva che "Pinned files" pane peji.
Kana iwe ukashandisa Akaunti yeMicrosoft, iyo Yakapiniwa uye Ichangoburwa mafaera kubva kuHofisi.com ichaonekwawo pane “Kurumidza Kupinda” peji.
On Windows 11, iwe uchaona itsva OneDrive yekubatanidza iyo inokupa iwe kutonga kwakawanda pamusoro pekuchengetedza kwegore uye kutarisa kuwiriranisa kwefaira. Paunovhura iyo "OneDrive" dhairekitori, File Explorer yave kuratidza yekudonha-pasi menyu mukona yekurudyi iyo inokuzivisa iwe kana mafaera ako ari kuwiriranisa, chengetedzo iripo musevhisi, uye kukurumidza kuwana zvigadziriso uye kugadzirisa kuchengetedza. .
PaFaira Explorer, kana iwe uchigovera faira remunharaunda uchishandisa desktop desktop yeOutlook, iwe unenge wave kukwanisa kunyora iyo email nezvinamatidzwa zvakananga kubva kune yekugovana interface. Zvisinei, kubatanidzwa uku kunoda Outlook Desktop Integration plugin inowanikwa kuburikidza neMicrosoft Store.
Microsoft iri kudzosa zvakare kugona kuve nekutarisa pamaforodha kuti upe kutarisa kune zviri mukati mefolda.
Paunovhura Properties ye hard drive, bhatani re "Storage Usage" rakatumidzwa zita rekuti "Details," uye kuita kwekudzima mafaera kubva kuRecycle Bin kwakagadziridzwa.
Vaka 22557 inosumawo Live Captions, izvo, sezvinoreva zita, chinhu chinogona kubatsira chero munhu kuti anzwisise zvirinani odhiyo nekuverenga zvinyorwa zvezviri mukati. Iyo ficha inogona kuona uye kuburitsa otomatiki zvinyorwa zvinoverengeka kubva muodhiyo inobuda mumukati kana maikorofoni.
Iwe unogona kuisa zvinyorwa kumusoro kana pasi, uye pane sarudzo yekuyangarara iyo interface padesktop, iyo zvakare inokuita kuti uwedzere saizi uye kuifambisa kutenderedza chero kupi pachiratidziri. Sezvo ichi chiri chikamu chezvinyorwa zvinoratidzira pa Windows 11, unogona kugadzirisa chiitiko kubva Settings > Accessibility > Zvinyorwa. Chimiro chacho parizvino chiri kutsigirwa muChirungu (United States) zvirimo.
Unogona kuvhura Live Captions uchishandisa iyo Windows kiyi + Ctrl + L nzira yekudimbudzira keyboard. Kana aka kari kekutanga kuvhura chimiro, iwe unozokurudzirwa kudhawunirodha pasuru kuti ubvumire pane-mudziyo zvinyorwa.
MuKiya skrini, kunyanya, kana iwe uri mu-sign-in-screen, iyo "Kuwanika" menyu kubva pakona yepasi-kurudyi yakagadziridzwa kuti ienderane nemaitiro edhizaini. Windows 11.
Pamusoro pezvo, zvidzoreso zvemidhiya zvinoonekwa kana uchiridza mimhanzi kana mudziyo wakavharwa zvakagadziridzwa kuti zvienderane netsva Windows 11 mutauro wekugadzira une makona akatenderedzwa uye semi-pachena zvinhu.
Task Manager kugadzirisazve
Microsoft iri kuunzawo yekutanga kutarisa kweiyo Task Manager app. Iyo itsva app ikozvino inopindirana nemutauro wekugadzira we Windows 11 ine makona akatenderedzwa, semi-pachena zvinhu, nyowani iconography, uye tsigiro yerima uye rakareruka ruvara modes.
Iyo app inochengeta iyo yakajairika dhizaini yekirasi app asi iine furemu nyowani inoisa zvinodzora zvekufamba kuruboshwe. Iwe ucharamba uchiwana iwo mapeji akafanana nekuwedzera kwepeji rezvirongwa mukona yepasi-kurudyi iyo inoita kuti usarudze kuti ndechipi chikamu chinofanira kuvhurwa nekusarudzika, gadzirisa iyo yekumhanyisa yeruzivo, zvimwe. windows manejimendi sarudzo, uye mamwe mashoma sarudzo.
Kunyangwe iyo vhezheni yeTask Manager inotsigira iwo akasviba uye akareruka matema, haugone kushandura maitiro eruvara uchishandisa marongero. Pane kudaro, iyo app inopindura kune system color modhi.
Iyo app inosumawo nyowani "Efficiency modhi" (yaimbova "Eco modhi") chimiro chakagadzirirwa kudzikamisa kushandiswa kwemasevhisi uchishandisa zvakawanda zviwanikwa pamaoko. Iyi ficha inofanirwa kuvandudza hupenyu hwebhatiri uye kubatsira kukoshesa zviwanikwa zvemamwe maapplication.
Iyo "Efficiency mode" inowanikwa kubva ku "Processes" tab yekuraira bar kana nekudzvanya-kurudyi maitiro aunoda kumisa. Nekudaro, iwe unogona chete kushandisa iyi ficha kune imwechete maitiro uye kwete kune boka remaitiro ekushandisa. Zvakare, iyi sarudzo inowanikwa kune system process.
MuTask Maneja mutsva, chimiro chitsva chinogona kucherechedzwa ne "shizha" icon, uye chiratidzo che "kumbomira" ndechekuziva maitiro akamiswa.
Windows 11 kuvaka 22557 inounzawo magadzirirwo mazhinji eApp Settings, kusanganisira zvigadziriso kuti zvipe mibairo yakakosha paunenge uchitsvaga marongero kana mibvunzo ine matypos akajairika.
Mifananidzo iri kuruboshwe yekutenderera pane yakura kuita kuti zvive nyore kuona, uye iwe unowana mifananidzo mitsva yeakasiyana maficha, anosanganisira "Focus," "Usavhiringidze," "Spatial audio," uye zvimwe zvakawanda. Iwe uchawana zvinongedzo zvine ruzivo rwekudzokorodza kana kutengesa mudziyo wako kuti upe hupenyu hwechipiri nemazvo. Uye iwe uchawana akati wandei shanduko uye kuvandudzwa.
On maitiro > kuratidza > HDR, Windows 11 iri kuwedzera itsva "HDR Display Calibration" sarudzo yeiyo iri kuuya calibration app. Nekudaro, panguva yekunyora uku, sarudzo iyi link inonongedza kune positi ine zvimwe zvakawanda nezve chimiro.
On maitiro > kuratidza, iyo "Multiple inoratidza" zvigadziriso zvine nyowani "Ease cursor kufamba pakati pezviratidziro" sarudzo kuti zvive nyore kufambisa chitubu uye. windows pakati pezviratidziro. Iyo ficha inoshanda nekubvumira cursor kuti isvetuke nzvimbo iyo yaimbobatikana.
On maitiro > kuratidza > Graphics, mu Default graphics marongero peji, Microsoft iri kuwedzera chinhu chitsva chinozivikanwa se "Optimizations yemitambo ine hwindo." Chinhu chitsva ichi chakagadzirirwa kuvandudza latency uye kubvumira emitambo maficha seAuto HDR uye Variable Refresh Rate (VRR) yemitambo ine mahwindo.
On maitiro > kuratidza > Notifications, peji yacho yakagadziridzwa nemaitiro matsva ekugonesa uye kugadzirisa "Usavhiringidza," kusanganisira kukwanisa kushandisa mitemo ye otomatiki uye kuisa zviziviso zvekutanga.
On maitiro > kuratidza > Focus, iwe unogona ikozvino kutanga musangano wekutarisa uye kuseta yakatarwa nguva. Uye zvakare, iwe unogona zvakare kudzora kana yekubatanidza iyo Focus nekutarisa zvikamu muClock app uye kudzima zvimwe zvinokanganisa paunenge uchishandisa maficha, kusanganisira kuvanza mabheji zviziviso, kupenya maapplication muTaskbar, uye kugonesa usakanganisa.
On maitiro > kuratidza > Simba & bhatiri, Windows . Pamusoro pe, Windows 11 ikozvino ichapa kurudziro yekubatsira vashandisi kuziva nezve kabhoni emissions kune avo vane marongero akaiswa ku "Never."
Iyo peji inosanganisirawo nyowani "Simba rekushandisa uye kabhoni emissions" chinongedzo chine ruzivo pakusarudza magadzirirwo emagetsi anoshanda.
On maitiro > chengetedzo > Kuchengetedza nzvimbo, chiitiko chakagadziridzwa kuti chienderane neiyo Settings app dhizaini maitiro.
On maitiro > chengetedzo > Madhisiki & Mavhoriyamu, peji haisi kuwana zvitsva, asi ruzivo rwakagadziridzwa kuti ruenderane neMagadzirirwo epurogiramu yemagadzirirwo emagadzirirwo.
Iyo interface inogadziridza ye "Nzvimbo dzekuchengetera" uye "Disks & Mavhoriyamu" zviitiko zvave zviripo kubvira kuvaka 22543.
On maitiro > kuratidza > About, pasi pechikamu che "Related settings", iwe zvino uchawana "Trade-in or recycle your PC" sarudzo, inova chinongedzo kune peji rekunze reMicrosoft rine ruzivo rwekuti ungatengesa sei zvakanaka kana kudzokorora komputa yako.
On Network & internet > Dial-up, iyo ficha yakagadziridzwa kuitira kuti kana uine chinongedzo, dhizaini inoenderana nedhizaini yeApp Settings itsva.
On Personalization > Taskbar, iyo "Taskbar maitiro" marongero anosanganisira sarudzo nyowani yekudzivirira iyo Taskbar kubva kuratidza inopenya maapplication.
On Personalization > fonts+
On Accounts > mhuri, iri peji idzva, asi marongero acho haasi matsva. Microsoft iri kupatsanura marongero ekugadzirisa maakaundi emhuri pane peji nyowani. Pakutanga, zvigadziriso izvi zvaive pane "Vamwe vashandisi" peji.
On Accounts > Vamwe vashandisi, iyo peji ikozvino yave kungogadzira emuno neMicrosoft maakaundi. Izvo hazvichasanganisi zvigadziriso zvekuwedzera kana kubvisa nhengo dzemhuri.
Nguva & mutauro
On Nguva & mutauro, chikamu ikozvino chinosanganisira masimba ekutonga nenguva uye zuva, uye iwe uchaona zvakare ruzivo nezve yazvino nguva zone uye dunhu.
On Nguva & mutauro > Zuva & nguva, iyo peji inosanganisirawo magamba ekutonga nenguva uye zuva, uye iwe uchaona zvakare ruzivo nezve yazvino nguva zone uye dunhu.
On Accessibility > Zvinyorwa, iyo peji ikozvino inosanganisira kubatidza uye kugadzirisa iyo Live Captions maitiro.
Kuvanzika & chengetedzo
On Kuvanzika & chengetedzo > For developers, peji yakagadziridzwa kuti ienderane nemaitiro ekugadzira anowanikwa pane ese maSettings app ane marongero ekudonhedza pasi uye marongero ari nani.
Microsoft Edge uye Narrator
On Windows 11 kuvaka 22557, Microsoft iri kuunzawo akati wandei ekuvandudza kweNarrator muMicrosoft Edge kuti uwane ruzivo rwakanaka paunenge uchitsvaga pawebhu uye ma dialog uye editing zvinyorwa zvakavimbika.
Mukugadzirisa uku, Narrator anogona kuverenga chinhu chiripo pane peji (peji razvino, nguva iripo, nezvimwe). Zvakare, kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchironga matafura, iyo ficha inozivisa iyo yekurongeka, sekukwira nekudzika.
Iyo ficha ikozvino inoita kuti zvive nyore kunzwisisa kana chinhu chasarudzwa mukuona kwemuti uye mamiriro ebhokisi rekutarisa kana iri chikamu cherondedzero. Uye zvakare, Microsoft iri kuvandudza yekubatanidza nzira, uye kana yakagadzikana pabhokisi rebhokisi, iyo ficha zvino ichakubatsira iwe kuramba wakatarisa mukati mebhokisi rebhokisi.
Pamusoro pezvo, Narrator anosanganisira akavandudzwa ekugadzirisa zvinyorwa pawebhu munzira dzinoverengeka. Semuenzaniso, iyo ficha ichaverenga iyo hunhu yakadzimwa mumunda, uye inosimbisa mavara kana uchishandisa "Control + X" nzira yekudimbudzira.
Uyezve, Windows 11 kuvaka 22543 yakaunzawo manzwi matsva echisikigo eNarrator, zvichiita kuti vashandisi vavandudze ruzivo kana uchitsvaga pawebhu, kuverenga, kunyora tsamba, nezvimwe.
Izwi idzva rechisikigo rinoshandisa tekinoroji-kune-kutaura tekinoroji pasina kuda kubatana kweinternet. Ichi chinyorwa chiripo pari zvino pachishandiswa mutauro weChirungu (United States).
Iwo Natural Voices marongero anowanikwa kuburikidza neNarrator marongero. Kana uri kuseta chimiro kekutanga, baya bhatani rekuti “Isa izvozvi”, sarudza izwi rekuti “Jenny,” “Aria,” kana “Guy,” wobva wadzvanya bhatani rekuti “Isa”.
Mukuwedzera, Narrator ane mirairo mitsva yekuchinja pakati pemanzwi:
Narrator + Alt + Minus kiyi - inoenda kune yakapfuura mameseti ezwi combo bhokisi.
Narrator + Alt + Plus kiyi - inoenda kune inotevera izwi marongero combo bhokisi.
Narrator + Alt + Left Bracket kiyi - inoenda kumodhi yekuverenga yepunctuation yapfuura.
Narrator + Alt + Right Bracket kiyi - inoenda kumodhi yekuverenga yepunctuation inotevera.
Sechikamu chekuchinja kwehurongwa, kuvaka 22557 ine boka rekuvandudza. Semuyenzaniso, Windows Kutsvaga paTaskbar kuchave nekukurumidza uye kwakaringana. Zvakare, kubvira kuvaka 22526, Windows 11 yakawedzera dzimwe nzvimbo kuma indexes kuti igone kukurumidza kutsvaga.
Windows . Iwe uchawana kuita uku paKudzora Panel-maitiro applets uye Run command.
Windows 11 ichadzikisira TKIP neWEP kuchengetedza zviyero kutanga nekuburitswa uye kuenda kumberi, uye inoramba kubatana nemawaya network uchishandisa aya mazinga ekuchengetedza.
kubva Windows 11 (kuvaka 22526) ikozvino inotakura nerutsigiro rwekutaura kwakakura kana uchishandisa Apple AirPods zvigadzirwa (AirPods, AirPods Pro, kana AirPods Max) kuvandudza odhiyo mhando yekufona kwezwi.
Chekupedzisira, iyo ring ring animation yakagadziridzwa pakuvandudza komputa kune imwe vhezheni ye Windows 11 ine mhete inofambira mberi pachinzvimbo chedenderedzwa rinorarama remadoti.
Microsoft inowedzera iyo Dynamic Refresh Rate (DRR) chimiro kumalaptops ane 120Hz anoratidza paunofambisa mbeva cursor kuita kuti mudziyo unzwe sekudaira. Smooth kupuruzira kuri kuuyawo kuMicrosoft Edge. Uye kubata uye peni "kupindirana kunosanganiswa kuita mifananidzo yakapfava mukati Windows UI uye maapplication UI."
Sechikamu chekuvandudzwa kwekupinza, mukuburitswa kwazvino kwe Windows . Pamusoro pezvo, Microsoft iri kuunzawo rutsigiro rudiki rweChinese Yakarerutswa Microsoft Pinyin uye Microsoft Wubi IMEs.
Mamwe ma emojis akagadziridzwa zvakare, kusanganisira iyo yemisodzi emoji, sakura emoji, uye ine mavara emoyo emojis. Iwe zvakare uchawana zvinhu zvitsva muchikamu che kaomoji, kusanganisira UwU.
Pakupedzisira, kumutauro weHungary, Windows 11 ikozvino inotsigira kunyora neruoko.
Iyo Voice typing chiitiko yakagadziridzwa zvakare nesarudzo yekusarudza maikorofoni yaunoda kushandisa nechinhu, uye kune mirairo mitsva, inosanganisira:
Pinda - Iti: Dzvanya Enter.
Backspace - Iti: Press Backspace, Backspace.
Nzvimbo - Iti: Press Space, Isa Space.
Tabhu - Iti: Dzvanya Tab, Tab.
Iyo Voice access chiitiko chiri kuwana chigadziriso chekutsigira manyorerwo otomatiki paunenge uchiraira mavara. Iwe zvakare une sarudzo yekusefa kutuka, iyo inogoneswa nekusarudzika, uye chero mazwi anonzwisa tsitsi anozovharwa neasterisk (*).
Zviri nyore kushandisa mirairo ye "ratidza nhamba", mameseji emhinduro akavandudzwa, uye chimiro chave nyore kushandisa nekiibhodhi yekubata paunenge uchiisa password, PIN, kugadzirisa zvikanganiso, uye zviperengo mazwi ane "chaiyo icho" uye "spell." izvozvo” anorayira.
Pakupedzisira, Windows 11 kuvaka 22557 inosvitsa zvishanu zvitsva zvekubata zvimiro zvekufamba-famba padesktop. Aya maitiro matsva anosanganisira:
Swipe nemunwe wako kubva pakati peTaskbar kuti uvhure Start menu uye swipe uchidzokera pasi kuti uivhare.
Swipe kurudyi kuenda kuruboshwe kubva pachikamu che "Pini" kuti uvhure runyorwa rwe "All apps" uye kuruboshwe kuenda kurudyi kuti udzokere kuPinned. Ichi chiito chinoshandawo kune Yakakurudzirwa nzvimbo kuti uone mamwe mazano.
Rova nemunwe wako kubva kuzasi kurudyi kweTaskbar kuti uvhure Kurumidza Settings uye swipe uchidzokera pasi kuti uvhare.
Pamusoro pezvo, Microsoft yakachinja iwo animation kana uchitsvaira kuti uvhure kana kuvhara "Notification Center" kuti unzwe zvakanyanya uye uteedzere chigunwe chako. Iwe unozoona zvakare gripper nyowani paunenge uchitsvaira kubva kumucheto kwechidzitiro kune maapplication nemitambo mune yakazara-screen modhi. Sekureva kwekambani, chimiro ichi "chakagadzirirwa kuti urambe uri muapp yako kana ukatsvaira padyo nemupendero. Kana iwe uchida kuwana zviri mukati, ingo swipe zvakare pane gripper. "
Kune zvimwe zvinobatsira zvinyorwa, kufukidza, uye mhinduro kumibvunzo yakajairika nezve Windows 10 uye Windows 11, shanyira zvinotevera zviwanikwa:
Windows 11 imwe Windows Pakati - Zvese zvaunoda kuti uzive
Windows 11 rubatsiro, mazano, uye mazano
Windows 10 on Windows Pakati - Zvese zvaunoda kuti uzive
Windows 11 Insider Preview Vaka 22557 inounza Dhonza uye Kudonhedza paTaskbar, Kutanga Menyu Folder uye nezvimwe.
Nzira Yokusvitsa File Yose Ku Windows 10 Taskbar
Windows 10 Redstone 4 (RS4) Inovaka Changji
Microsoft Windows Kuchengetedzwa Kuvandudzwa Kukadzi 2019 pfupiso
Microsoft Windows Kuchengetedzwa Kugadziridza Gunyana 2020 kuongorora
Filed Under: Technology News Tagged With: Windows 11 Vaka Changelog, Windows 11 Vaka Mashoko, Windows 11 Vaka Chikurukuru, Windows 11 Vaka Zvinyorwa Zvokusunungurwa, Windows 11 Vaka Zvigadziridzo